स्मार्टफोन हरायो, चोरी भयो ? ‘किल बटन’ थिच्नुहोस् आफै पत्ता लाग्छ ! - Science Dialog
प्रविधियुक्त युगमा विभिन्न प्रविधि आविष्कार भएका छन् । र ति धेरै महंगा पनि हुन्छन् । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न मान्छे जतिसुकै महंगो भएपनि तयार हुन्छ ।
तर, कतिपय अवस्थामा महंगा प्रविधियुक्त सामाग्री हराउने गर्दछन् । यदी त्यसो समस्या छ भने अब चिन्ता लिनुपर्दैन् । अमेरिकामा एउटा यस्तो सफ्टवेयर बनाउन लागिएको छ जसले तपाईको हराएको प्रविधियुक्त सामाग्री पत्ता लगाईदिनेछ । अहिलेको युगमा सबै प्रविधि मोबाइल फोनमा हुने भएकाले अधिकांशले प्रयोग गर्दछन् । अमेरिकामा बन्न लागेको सफ्टवेयर स्मार्टफोनको हो । यदी स्मार्टफोन चोरी भएमा अथवा हराएमा ‘किल बटन’ वटन थिच्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो थिचेपछि मोबाइलको कम्पनी कोड राख्दा लोकेशन बताईदिने इन्जिनियरहरुले बताएका छन् । यो प्रणाली छिट्टै संसारभर लागू गरिने स्मार्टफोनले जनाएको छ ।
अहिले यो प्रविधि अमेरिकाको कनेक्टिकट, इलिनॉयस, मिसिसिपी, मिसौरी, न्यू मेक्सिको, न्यूयार्क, ओरेगॉन र भर्जीनिया प्रान्तमा कानून बनाएर लागू गरिदैछ । अबका हरेक नयाँ स्मार्टफोनमा नया सफ्टवेयर पहिल्यै अपलोड गरिनेछ । जसको मद्दतले मोबाइल चोरी हुने वा हराउने समस्याबाट छुटकारा पाईने छ ।
खबरअनुसार सैन फ्रांसिस्को, न्यूयार्क र लण्दनको दूरसञ्चार उपकरण बनाउने कम्पनीहरुले आफ्नो उपकरणमा ‘किल बटन’ नामको सफ्टवेयर जडान गरिसकेका छन् । ‘किल वटन’ जडान गरेपछि स्मार्टफोन चोरी कम भएको दुरसञ्चार कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।
Next story तपाइले जान्नै पर्ने केहि सर्टकट किबोर्ड
Previous story कोकमा विषाक्त रसायन: क्यान्सरदेखि मुटुरोगसम्मको मुख्य कारक